Iikomityi zephepha, zigqibelele ikofu, itshokholethi eshushu okanye nayiphi na into eselwayo eshushu okanye ebandayo, ilungele ukusetyenziswa ekhaya okanye kwintengiso. Ifanelekile iti yobisi, ivenkile yobisi lwembotyi, iivenkile ezibandayo, iivenkile ezithengisa ukutya okukhawulezayo, ivenkile yekofu iDessert House Hotel, irestyu, ikhaya kunye nolonwabo, Ubushushu obuphezulu ...
Iikomityi zephepha, zigqibelele ikofu, itshokholethi eshushu okanye nayiphi na into eselwayo eshushu okanye ebandayo, ilungele ukusetyenziswa ekhaya okanye kwintengiso. Ilungele ivenkile yobisi yeti, ivenkile yobisi lweembotyi zesoya, iivenkile ezibandayo, iivenkile ezithengisa ukutya okukhawulezayo, ivenkile yekofu iDessert House Hotel, irestyu, ikhaya kunye nolonwabo,
Ubushushu obuphezulu be-100 DEG C, akukho kuvuza, akukho vumba, akukho deformation ilula.
Iikomityi zephepha kunye neziciko
8oz indebe eshushu
10oz indebe eshushu
12oz indebe eshushu
16oz indebe eshushu
20oz indebe eshushu
22oz indebe eshushu
Iziciko zeekomityi zephepha
ilungele isiciko se-8oz yedome
kufanelekile 12 ~ 22oz isiciko esicaba
ilungele i-12 ~ 22oz isiciko sedome
Udonga olunye / Udonga oluphindwe kabini / udonga oluqhuqhekileyo
Ukutya kwibanga le-100% iphepha elinyulu
Ukuprintwa kweFlexo / ukulinganisa okungafaniyo nge-inki yokutya
I-logo kunye noyilo zamkelwe ngokufudumeleyo
T / T; L / C, njalo njalo
Iisampulu zasimahla zinokufumaneka
Iphepha le-1Virgln eline-FSC kunye nesiqinisekiso se-PEFC.Imveliso ene-FDA, LFGB, isitifiketi seCOC.
Ukuprinta kwe-2.Flexo nge-inki yokutya. Nika uyilo olwenziweyo kunye nokupakisha.
3.Umzi mveliso wethu unokubonelela ngazo zonke iintlobo zeemveliso ozifunayo.
Umzi-mveliso wethu ubambe izakhiwo ezitsha ezithathu, elilelona likhulu elenza iikomityi zephepha embindini we China, egubungela indawo yeehektare ezingama-46.
Mveliso 5.Our ubambe oomatshini PE ezimbini ukutyabeka, oomatshini bokushicilela ezine, oomatshini 80 phakathi, oomatshini ngesantya esiphezulu 40 kunye nabasebenzi abangaphezu kwama-400, kunye isityalo uthuli-free.
6.Zintathu ulawulo lomgangatho olungqongqo kunye nokulandelwa kwemveliso esemgangathweni.
7.Sinokwenza imodeli yayo nayiphi na imilinganiselo yemveliso.
Egqithileyo Ipheyile lephepha
Indebe iphepha Universal